Shina Cryogen oxygen plant dia mitaky famokarana sy mpamatsy oxygen oxygen OR
1: Ny fitsipiky ny famolavolana an'ity zavamaniry ity dia ny miantoka ny fiarovana, ny fitsitsiana angovo ary ny fandidiana sy ny fikojakojana mora foana. Ny teknolojia no mitarika toerana eto amin'izao tontolo izao.
A: Mila famokarana rano be dia be ny mpividy, koa manome ny fizotran'ny fanodinana rivotra mahery setra izahay mba hamonjy ny fampiasam-bola sy ny fanjifana angovo.
B: Mampiasa compresseur rivotra azo ampiasaina izahay ary alaim-panahy avo lenta. dingana fanitarana mba hitsimbinana ny fanjifana herinaratra.
2: Mampiasa teknolojia fanaraha-maso solosaina DCS izy hifehezana ny tontonana lehibe, tontonana eo an-toerana amin'ny fotoana iray. Ity rafitra ity dia afaka manara-maso ny fizotran'ny zavamaniry manontolo.
Ny zavamaniry manasaraka ny rivotra dia mifototra amin'ireo teboka samihafa amin'ny koban'ny isam-bolana. Ny rivotra aloha dia voatsindry, namboarina ary nesorina ny H2O sy ny CO2. Aorian'ny fihenan-tsakafo ao amin'ny exchanger hafanana antonony mandra-pahatongany amin'ny mari-pana hafanana dia manitsy eo amin'ny tsanganana izy mba hahazoana oksizena sy azota ranoka.
Ity zavamaniry ity dia sivana manadio molekiola amin'ny fizotran'ny expo turbo.
Aorian'ny fanesorana ny vovoka sy ny fahalotoan'ny mekanika ao amin'ny sivana amin'ny rivotra dia mandeha any amin'ny compressor turbine rivotra ny rivotra manta hanindry ny rivotra mankany amin'ny 1.1MpaA, ary hampangatsiaka hatramin'ny 10 ℃ ao amin'ny vovon-drivotra. Avy eo dia miditra amin'ny mpitroka sieve molekiola hafa izy mba hanala ny H2O, CO2, C2H2. Ny rivotra madio dia voan'ny presseur ary miditra ao anaty boaty mangatsiaka. Ny rivotra manindry dia azo sarahina amin'ny fizarana 2. Aorian'ny fampangatsiahana hatramin'ny 256K, ny fizarana iray dia mivoaka mankamin'ny unit 243K, dia ampangatsiahina tsy tapaka ao anaty exchanger hafanana lehibe io. Ny rivotra mangatsiaka dia hisarika ny expander, ary ny ampahany amin'ny rivotra miitatra dia miditra ao amin'ny exchanger hafanana lehibe mba hamerina hiasa, avy eo mivoaka avy ao anaty boaty mangatsiaka. Ary ireo faritra hafa dia mankamin'ny tsanganana ambony. Ny fizarana hafa dia mihamangatsiaka amin'ny alàlan'ny counter counter, ary mandeha amin'ny tsanganana ambany aorian'ny nanitarana azy.
Aorian'ny fanitsiana voalohany indrindra ny rivotra dia afaka mahazo rivotra misy rano isika, nitroka ranoka misy azota ary azota madio madio ao amin'ny tsanganana ambany. Rivotra misy ranoka, azota misy ranoka ary nitroka ranoka madio tsentsitra avy eo amin'ny tsanganana ambany dia mankao amin'ny tsanganana ambony aorian'ny fampangatsiahana ranoka sy ranoka azota madio madio. Aorian'ny fanitsiana ao amin'ny tsanganana ambony, afaka mahazo oksizenina ranoka madio madio 99,6 eo ambanin'ny tsanganana ambony isika, dia mivoaka toy ny vokatra. Ny ampahan'ny azota noentina avy eo an-tampon'ny tsanganana fanampiana dia mivoaka avy ao anaty boaty mangatsiaka ho vokatra.
Ny azota fako voatsoka avy eo an-tampon'ny tsanganana ambony dia mivoaka avy ao anaty boaty mangatsiaka aorian'ny famerenan'ny mpampita hafanana mangatsiaka sy lehibe. Voafoka amin'ny ampahany aminy, mandeha any amin'ny rafitra fanadiovana molekiola izy io ho toy ny loharanom-pahavoazana. Ny hafa kosa avoaka.
Previous: Fambolena entona oksizenina ranon-tsolika cryogenika zavamaniry nitroka ranoka
Manaraka: Karazan-tsarimihetsika cryogenika avo lenta mahomby amin'ny rivotra madio fisarahana zavamaniry mpamokatra ranoka sy oxygen
Fitaovana Generator Nitrogen Liquid an'ny Industria
Plant Production Nitrogen Liquid
Zavamaniry nitroka ranoka zavamaniry Gas Nitrogen gazy ...
Tombontsoa momba ny vokatra Manamboatra zavamaniry oksizenina izahay ho an'ny famenoana varingarina miaraka amina fitaovana sy singa tsara indrindra. Manamboatra ny zavamaniry ho an'ny mpanjifa sy ny fepetra eo an-toerana izahay. Misongadina eo amin'ny tsenan'ny entona indostrialy izahay manolotra ny fampifangaroana tsara indrindra ny vidiny sy ny fahombiazan'ny rafitray. Noho izy mandeha ho azy tanteraka dia afaka mihazakazaka tsy misy mpiambina ireo zavamaniry ary afaka ...